Farsamooyinka Birta Dahaarka Dahaarka Lapel Pin Custom Custom Design Enamel Pin
Cabir: qiyaastii 3cm
Dhinaca dambe: astaan ​​shaabadaysan oo leh 2 tiir oo taageero ah
Baakadaha: bacda poly / kaarka taageerada caadada.
Habka farsamada: wax taaj oo kale, dhinto ridaya, qiraan, dhaldhalaalka adag, dahaadhay, QC, baakadaha.
Farshaxanimada: dhaldhalaalka adag
Midabka dhaldhalaalka adag iyo khadadka biraha ayaa kudhowaad isku dherer ah, dusha pin dhaldhalaalka adag ayaa dareemaya macaan oo daciif ah birta dhaldhalaalka jilicsan.
Si la mid ah dhaldhalaalka jilicsan, pin dhaldhalaalka adag ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa midabbo kala duwan oo bir ah, sida nikkel, qalin, dahab, naxaas, naxaas, dahab dahab rose laakiin biinka dhaldhalaalka adag ma sameyn karo midab u dhimanaya birta. Sababtoo ah biinanka dhaldhalaalka adag, habka dahaadhku wuxuu yimaadaa geedi socodka midabaynta, iyo ka hor intaan la xoqin, waxaa jira talaabo aad u muhiim ah oo ka dhigaysa inay gabi ahaanba ka duwan tahay dhaldhalaalka jilicsan - SHAQAYNTA, hawsha nadiifintu waa samaynta birta kor u kacday iyo dhaldhalaalka adag midab isku diyaaradood, taasi waa sirta sababta biinanka dhaldhalaalka adag uu u yeesho dusha sare ee siman, marka biinka dhaldhalaalka adag, xitaa birta waa la midabeeyaa, midabka ayaa ugu dambeyn la xoqidoonaa inta lagu gudajiray sifaynta.
Dhaldhalaalka adag ayaa ku habboon inta badan calaamadaha biinanka, qadaadiicda, furaha silsiladaha, bilado, astaamaha, isku xidhka iyo alaabada kale ee birta ah.
1. Ma waxaad tahay warshad?
HAA, waxaan nahay warshad leh shahaadooyinka ISO iyo TUV.
2. Waxaan haynaa fikrad fiican, ma noo qaabeyn kartaa?
Waxaan kuu samayn karnaa farshaxan farshaxan adiga oo raacaya faylasha soo socda: JPG, PNG, PDF, AI, CDR, iwm
3. ka waran MOQ?
4. Muddo intee le'eg ayaa amarkeyga la geyn karaa ka dib markaan amar bixiyo?
Waqtiga wareejinta waxay kuxirantahay tirada dalabka iyo farsamada kala duwan.
Caadi ahaan, waxay ku dhowdahay hal toddobaad tijaabada ka dib markii farshaxanka la xaqiijiyay; 10-20 maalmood wax soo saarka badan.
5. Sideen ugu tiirsanaan karaa tayadaada?
Kahor rarka, waxaan ku tusi doonaa sawirro iyo fiidiyowyo kormeerka oo dhan ah, wixii dhibaato ah, waan hagaajin karnay kahor rarka.
Xitaa dhibaatooyinka jira marka aad hesho badeecada, waxaan leenahay adeeg aad u fiican kadib-iibka si aan ugula shaqeyno xalka ugufiican illaa aad ku qanacsantahay.
Intaa waxaa dheer, waxaan kugula talineynaa macaamiisha inay sameeyaan Amarka Hubinta Ganacsiga si amar kasta uu u hoos yimaado ilaalinta kooxda Alibaba, oo siisa dareen amni labadaba.
6. Sidee ku saabsan shuruudaha bixinta?
Waxaan aqbali karnaa T / T, PayPal, WU, MG, iwm. 30% -50% dhigaalka si aan u bilowno amarka, dheelitirka waa la dhammeeyaa ka hor rarka. Shuruudo kale oo kasta oo ka mid ah shuruudaha Lacag bixinta waa laga wada xaajoon karaa.
7. Ma dooran karaa habka rarka?
Dabcan! Dhinaca Badda, Hawada ama Warqadaha: FedEx, TNT, DHL, UPS, iwm. Waxaad dooran kartaa nooc kasta oo hab maraakiib ah oo adiga kugu habboon.
Hore: Glitter Enamel Pin Custom Design Aluminium Sameeyay Epoxy Lapel Pin Badge
Xiga: Biladaha Dahabka ah ee Birta Dahabka ah ee Macaamiisha ah ee Lagu Sameeyay Abaalmarinta Dhaldhalaalka Jilicsan
Biinanka Dhaldhalaalka Qurxinta
Biinanka dhaldhalaalka Cool
Biinanka dhaldhalaalka leh ee Funny
Musmaarradii naxdin Enamel
Calaamadaha Pin Lapel
Biinanka Lapel biinanka
Calaamad kartoo Calan Custom Logo Gold Silver Br ...
Custom Samaynta dhaldhalaalka musmaarradii Zinc Daawaha Die Castin ...
Naqshadeynta Kubbadda Cagta ee Kubadda Cagta Naadiga Zinc